Air Conditioning and Mechanical Ventilation for Young Myanmar Engineers Forum The Myanmar Environmental Forum • View topic - မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှူ အနုပညာ ပစ္စည်းတွေ
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှူ အနုပညာ ပစ္စည်းတွေ
by acmv » Sat Dec 28, 2013 8:02 pm
ဗြိတိသျှတို့က မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ အကောင်းတိုင်း အစိတ်အပိုင်းလိုက်မြှုပ်နှံထားခဲ့တဲ့ စပစ်ဖိုင်းယားတွေကို ပြန်လိုချင်ပါသတဲ့ ။ အခုမှသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တော့ အံများတောင်သြပါရဲ့ ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၂ နှစ်ကျော်ကတည်းက ရှာဖွေနေခဲ့ပါသတဲ့ ။အခု မြှုပ်နှံခဲ့တဲ့ စစ်သားဟောင်းတွေရဲ့ မှတ်တမ်း မှတ်ရာတွေနဲ့ apple ရဲ့ နည်းပညာတွေပေါင်းစပ်ရှာဖွေမှုနဲ့ လေယာဉ်အစင်း ၂၀ ကျော်ကို ပြန်တူးပြီး အကောင်းတိုင်းပြန်ယူတော့မယ်တဲ့ ။ ကျွန်တော်တို့သဘောကတော့ မပေးရဘူး ။ဘာကြောင့်လဲ ။ဒီလေယာဉ်တွေဟာ ဗြိတိသျှ သမိုင်းတင် မဟုတ်ပါဘူး ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသမိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ် ။ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမြေအောက်မှာ နှစ်ပေါင်း ၇၀ ကျော် အိပ်စက်နေခဲ့တာပါ ။ကျွန်တော်တို့လည်း ပိုင်တယ် ။ဒီလေယာဉ်တွေကို တူးဖော်ခွင့်ပေးခဲ့ မယ်ဆိုရင် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ခိုင်မာစေမှာလို့ ဒေးဗစ်ကင်မရွှန်းကပြောတယ် ။ဟုတ်ပြီ
။ဒီလေ ယာဉ်အစင်း၂၀ ပြန်ပေးမှ ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှာလား ။ဒါဆိုရင် ဘဲစားဘဲခြေလေး ကစားကြည့် ရအောင် ။ကျွန်တော်တို့ဆီက သမ သွားတဲ့ ပတ္တမြား ငမောက်ကြီး ဘယ်ရောက်နေ
တုန်း ။ ကိုင်း ... ဒီစာရင်းထဲက နန်းစဉ်ရတနာတွေ ပြန်ပေးမလား ။ ၁။သက္ကရာဇ် ၁၀၃၂ (အေဒီ
၁၆၆၁) လောက်ကတည်းက ရှိခဲ့တဲ့ အလေးချိန် ရတီကိုးဆယ်ကျော်ရှိသော ပတ္တမြား ငမောက် ၂။ဗဒုံမင်းလက်ထက်ကတည်းကရှိခဲ့တဲ့ရတီချိန် နှစ်ဆယ်ခန့်ရှိတဲ့ လှော်ကားတင် ကလေး
ဟုခေါ်သော ပတ္တမြား ၃။သက္ကရာဇ် ၁၁၉၉ (အေဒီ၁၈၃၇) ခုနှစ် ရွှေဘိုမင်းလက်ထက်ကတည်းက
ရှိခဲ့တဲ့ ရတီချိန်လေးဆယ်ကျော် လှော်ကားတင်ကြီး ဟုခေါ်သော ပတ္တမြား၎။အလေးချိန် လေးဆယ်
ရတီရှိ ဆင်ဖြူတော် ဟုခေါ်သော ပတ္တမြား ၅။အလေးချိန် ဆယ်ရတီရှိ ဆင်မတော် ဟုခေါ်သော
ပတ္တမြား ၆။စံထားအသုံးပြုရတဲ့ အချိန်ခြောက်ရတီရှိတဲ့ စံကျောက်တော် ဟုခေါ်သော ပတ္တမြား
ပြီးတော့ သူတို့ပြတိုက်ထဲက စစ်သူကြီး မဟာ ဗန္ဓုလ ရဲ့ သံချပ်ကာ ဝတ်စုံ ကြီးကို ရောပြန်ပေးနိုင်
မလား ။ ဧကရီဘုရင်မကြီးကို ပေးပို့သည့်ပစ္စည်းတွေထဲက သီပေါ၏ အကောင်းဆုံး သရဖူတစ်ခု၊
ဒုတိယ သရဖူ မှ မြကျောက်ကြီးသုံးလုံး၊ သရဖူထဲမှ ကျွတ်ကျသည့် ကျောက်အလွတ် ၈
လုံးထည့်ထားသည့် စက္ကအိတ် တစ်လုံး၊ စိန်ဒေါင်းရုပ်ပါသည့် ဘယက်တစ်ကုံး နှင့် ရွှေဘီး
တစ်ချောင်း ဒါတွေဟာ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်လုံးမနစ်နာတဲ့ တောင်းဆိုမှူပဲဖြစ်ပါတယ် ။ဒီသရဖူဟာ
သီပေါမင်းဆီက သရဖူ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပီးတော့ ဗြိတိသျှ ပြတိုက်တွေထဲက မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှူ အနုပညာ ပစ္စည်းတွေ ပြန်ပေး မလား ။ကျွန်တော်တို့ အစိုးရကရော ပြန်တောင်းပေးမလား ။အခုဗြိတိသျှ ဘုရင်မကြီးခေါင်းက သရဖူက ဘာနဲ့လုပ်ထားတယ် ထင်လဲ ။
ငံကနန်းစဉ်ကျောက်တွေနဲ့လုပ်ထားတာပါ ။တန်ဖိုးလား ။ဟုတ်ကဲ့ဗြိတ်ိသျှနဲ့ပြင်သစ်နှစ်နိုင်ငံကမြေေ
တွကိုအကုန်ဝယ်လို့ရနိုင်ပါတဲ့တန်ဖိုးတွေပါ။ဒါတွေပြန်ပေးမလား။စပစ်ဖိုင်းယားတွေဟာ ဗြိတ်ိသျှရဲ့အမျိုးသားရေးဂုဏ်တစ်ခုပါ။တကယ်လေးစားဖွယ်ကောင်းပါတယ်။ဒီတော့ကာ ဗြိတိသျှတွေဆီရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့နန်းစဉ်ပတ္တမြားတွေကရောတန်ဖိုးမဲ့ခဲ့ပြီလား။ဓါးပြတိုက်ယူသွားတဲ့ ကျောက်တွေမို့ အောက်ဈေးနဲ့ပဲရနိုင်တာပေါ့လို့ ဖြေသိမ့်တော့မှာလား။အဲဒီကျောက်တွေကရောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်တစ်ခုမဟုတ်တော့ဘူးလား။ကမ္ဘာ့ကျောက်မျက်ရတနာလောကမှာပတ္တမြားငမောက်ဆို
တာဒဏ္ဍာရီအဆန်ဆုံးနာမည်အကြီးဆုံးပါ။BurmeseRoyalRubyလို့တသွယ်SuFaYarLatt'sRubyလို့တနည်းနဲ့ခုချိန်ထိနာမည်ကြီးဆဲပါ။တသသပြောလို့မဆုံးတဲ့ကမ္ဘာ့ကျောက်မျက်လောကရဲ့စနိုးဝှိုက်ပုံပြင်တစ်ခုပါ။ကိုင်း....အဲဒါနဲ့တည့်-တည့် ပြန်ချိန်းလိုက်ရအောင်လား။နိုင်ငံရေးစကားနဲ့ဆိုရရင်WinWinအခြေအနေပါပဲဗျာ။ အခု ကမ္ဘာမှာ ဝေဟင်မှာ မောင်းနှင်နိုင်တဲ့ စပစ်ဖိုင်းယားဟာဆိုရင် ၃၆
စီးလို့ဆိုပေမယ့် လက်တွေ့မှာ အစီး ၃၀ သာ တကယ်မောင်းနှင်နိုင်ပါတော့တယ် ။အဲဒီ အစင်း ၃၀
ဟာလည်း တစ်စုတစ်စည်းတည်း မရှိပဲ နေရာ အနှံပြန့်ကျဲနေပါတယ် ။ဒီတော့ကာ ကျွန်တော်
တို့နိုင်ငံမှာ အစင်း ၂၀ လုံလုံး တစုတစည်း တည်း အကောင်းပတိ ရှိနေပါတယ် ။ ဒီအစီး ၂၀ ကိုပြတိုက်ထဲထည့် လိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံခြားငွေ ဘယ်လောက်စီးဝင်လာမလဲ ။ ဒါမှမဟုတ် ၁၀ စီးကို ပြတိုက်ထဲထည့် ၁၀စီးကိုအကောင်းအတိုင်းပြန်ဆင်ပြီးအပျော်တမ်းကလပ်ပုံစံသို့မဟုတ်
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေ လေ့လာသူတွေအတွက် မောင်းနှင်စီးနင်းနိုင်အောင်လုပ်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်???? ။ သူတို့ဒီလေယာဉ်တွေကို စရှာဖွေကတည်းက အခုချိန်ထိ ဒေါ်လာ နှစ်သိန်းတစ်သောင်းကျော် ကုန်ကျပါတယ်လို့ ပြောခဲ့တယ် ။ဟုတ်ပြီ ကျွန်တော်တို့သာဆိုလျှင် ရှာဖွေပေးခဲ့တဲ့ ဒေးဗစ်ဂျေ
ကန်ဒယ်လ်ကို ဒေါ်လာ သိန်းနှစ်ဆယ် ဆုချလိုက်ပါ့မယ် ။
ဘာကြောင့်လဲ ။ ဗြိတိသျှ သားတွေဟာ ကျွန်တော်တို့လိုမျိုး ဇာတိဂုဏ်ကို သိပ်တန်ဖိုးထားသူတွေပါ ။ သူတို့နိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ်ကျက်သရေကို ကျွန်တော်တို့ဆီလာကြည့်လာလေ့လာရမှာပါ ။အဲဒီတစ်ခုတည်းနဲ့တင် ကျွန်တော်တို့ မီးခိုးမထွက်တဲ့ စက်ရုံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေဆီကနေ နိုင်ငံခြားငွေ ထိုင်ယူနေရုံပါပဲ ။ဘယ်ေ
လာက်ကြာအောင် ထိုင်ယူနေမှာလဲ ။ဒီလေယာဉ်တွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေသမျှ နဲ့ နောင် သားစဉ်မြေး
ဆက်အထိ နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာ နိုင်ငံခြားငွေသဲ့ယူလို့ရမဲ့ အရာတွေပါ ။ သူတို့ကလည်း သူတို့နိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ်ယူစရာ အမွေအနှစ်ကြီးတွေကို ပြန်တောင်းတယ် ။ကျွန်တော်တို့ကလည်း ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ရတနာတွေ ယဉ်ကျေးမှူအမွေအနှစ်တွေ ပြန်တောင်းတယ် ။ကဲ.ဒါ ရာဇဝတ်မှူလည်းမဟုတ်ဘူး ။ မလုပ်ရတဲ့ စည်းမျဉ်းလည်း မဟုတ်ဘူး။သူတို့လူမျိုးဟာည ကျတော့ သိတတ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ဟာတွေကျတော့ ခပ်တည်တည်နဲ့ ပြတိုက်ထဲထည့်ပြီး သူတိုိ့နိုင်ငံက လုပ်စားပြစား ဂုဏ်ယူနေတာတော့ မဟုတ်သေးဘူးခင်ဗျ ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဘာမှပြောစရာ မရှိပါဘူး ....... အဲ တစ်ခုတော့ရှိတယ် ရေအဆုံး ကုန်းတစ်ဝက်တဲ့ ဒါပဲ !!
Credit >>> ကာရံ <<< ထပ်မံဝေမျှသည်။